Alcatel A7, notsapainay tamin'ny IFA 2017 | Androidsis
Izahay dia nanakaiky ny toeran'ny mpanamboatra ao anatin'ny rafitry ny IFA avy any Berlin hizaha toetra ny vahaolana rehetra. Efa nomenay anao ny hevitray taorian'ny fampiasana Alcatel A7 XL, izao dia anjaran'ny kinova decaffeine kokoa, ny Alcatel A7.
Ary i Alcatel dia gaga tamin'ity fanontana ity ny tsenan'ny teknolojia lehibe indrindra any Eropa amin'ny alàlan'ny fanolorana andalana fitaovana izay mikasa ny handrafitra akany amin'ny fidiran'ity sehatra ity sy eo afovoany. Ho azon'izy ireo ve izany? Tsy mila adim-potoana intsony aho, avelako ianao miaraka amin'ny my fahatsapana voalohany taorian'ny fitsapana ny Alcatel A7.
2 Ny toetra ara-teknikan'ny Alcatel A7
Toy ny kinova vitamina kokoa, ny famaranana ny Alcatel A7 dia tsy ilay akanjo matanjaka ao aminy. Ny telefaona dia manana vatana vita amin'ny polycarbonate izay mahatonga ny terminal ho toy ny kilalao kely. Tokony holazaiko fa ny finday dia tsy mahatsiaro ho ratsy eo am-pelatanany, tsy izany velively, fa izany fahatsapana an-tariby mora vidy fa tsy azoko esorina amin'ny fotoana rehetra.
Ny endriny dia mitovy amin'ny an'ny maodely ambony na dia misy antsipiriany sasany aza nahagaga ahy ahy. Ary izany ve ilay Alcatel A7 Izy io dia manana ny bokotra on sy off an'ny telefaona vita amin'ny aliminioma, tsy mitovy amin'ilay maodely hafa vita amin'ny plastika. Mikasika io lafiny io dia manome fampiasa premium sy fanavakavahana izay tiako manokana izy io. Saingy amin'ny ankapobeny dia miatrika afovoany isika miaraka amina famaranana tena tsotra sy famolavolana izay tsy miavaka mihitsy raha oharina amin'ireo mpifaninana aminy.
Ny toetra ara-teknikan'ny Alcatel A7
efijery 5.5 "IPS FullHD Dragontrial
processeur MediaTek MT6750T Octa core 4 x 1.5 GHz + 4 x 1 GHz
Fakan-tsary aoriana Aoriana: 16MP f / 2.0
Fakan-tsary mialoha 8 megapixels Horonantsary 1080p amin'ny 30 fps
lafiny 152.7 X 76.5 X 8.95mm
Ara-teknika dia telefaona iray mamela anao hamindra ny ankamaroan'ny lalao sy ny fampiharana tsy misy olana be loatra. Mazava ho azy, ny Alcatel A7 dia manana teboka roa mahaliana indrindra manohana azy: amin'ny lafiny iray dia manana isika Efijery 5.5-inch miaraka amin'ny vahaolana feno HD ary manolotra kalitaon'ny sary tena tsara, miaraka amin'ny loko voajanahary ary izay, ampiana amin'ireo mpandaha-teny roa eo alohany, manasa anao hankafy ny atiny multimedia miaraka amin'ny orinasa.
Ary etsy ankilany manana ny fakantsary anoloana miaraka amin'ny flash LED izay hahafaly ireo tia sary. Hoy aho, telefaona antonony tena tsotra, na dia misy singa roa tena mahaliana aza.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » About us » IFA » Alcatel A7, notsapainay izany tamin'ny IFA 2017